८ वर्षको कुकुर ५७ करोड सम्पत्तिको मालिक कसरी बन्यो ?
एजेन्सी । यदि कुनै कुकुर करोडौं रुपैयाँको मालिक बनेमा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? तपाईलाई यो कुरा केही अचम्म लाग्न सक्छ । खासगरी अमेरिकाको टेनेसी शहरमा बसोबास गर्ने बिल डोरिस नामका एक व्यक्तिले मृत्युपछि आफ्नो पालुवा कुकुर ‘लुलु’को लागि करीब ५ मिलियन डलर (करीब ५७ करोड बढी)को सम्पत्ति छाडेर गए ।
आफ्नो ८ वर्षको लुलुसँग बिल डोरिसको एकदमै लगाव थियो । बिल डोरिसले मर्नुभन्दा पहिले लुलुप्रति स्नेह देखाउँदै अन्तिम इच्छा व्यक्त गरे । उनको अन्तिम इच्छा आफ्नो मृत्युपछि उक्त सम्पत्तिलाई एक ट्रस्टमा हस्तान्तरण गर्ने जसले लुलुको राम्रोसँग हेरचाह होस् ।
रिपोर्ट अनुसार बिल डोरिसले आफ्ना साथी मार्था बर्टनलाई लुलुको हेरचाह गर्न पठाएका थिए । जसको हेरचाहका लागि ट्रस्टमा जम्मा भएको रकम मासिक रुपमा खर्च गर्न सकिनेछ । यता मार्था बर्टनले आफ्नो दिवंगत साथी बिल डोरिसको सम्झना गर्दै लुलु र उनको सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ रहेको बताइन् ।
उनले ५ मिलियन डलर खर्च गर्न सक्छिन् या सक्दिनन् तर उनले जति पनि खर्च गर्छिन् मासिक रुपमा उनलाई उपलब्ध हुनेछ । यद्यपि बिल डोरिसको कुल सम्पत्ति कति रहेको छ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । उनीसँग चल-अचल थुप्रो सम्पत्ति र विभिन्न व्यवसायमा लगानी रहेको बताइएको छ ।
एजेन्सी । कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिएपछि डेनमार्कमा गरिएको लकडाउनको विरोध गर्नेहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
एजेन्सी । आर्मेनियाका राष्ट्रपतिले देशको सेनाप्रमुख हटाउने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
नेपाल भाषाको ‘मैचाया सपलय्’ सार्वजनिक
काठमाडौँ । नेपाल भाषाका छ वटा म्युजिक भिडियो संग्रहित एल्बम ‘मैचाया सपलय्’ सार्वजनिक भएको छ । पाँच दशकसम्म नेपाल भाषाका गीत, संगीत, डबली नाटक, भजनमा सक्रिय रहेका संगीतकार भीमबहादुर नकःमिको शब्द तथा सं